गीत हिट भएपछि सिवाकोटीलाई बाइक उपहार - nayakhoj24.com
गीत हिट भएपछि सिवाकोटीलाई बाइक उपहार
प्रकाशित मिती: February 22, 2018 | naya khoj पढ्न:0मिनेट
काठमाडौँ — गीतकार, गायक एवं संगीतकार राजनराज सिवाकोटीका चार गीतले युटयुबमा एक करोडभन्दा बढी भ्युज पाएका छन् । फिल्म ‘दुई रुपैयाँ’ को ‘कुटुमा कुटु…’ ले ४ करोड ७३ लाख भ्युज पाइसकेको छ । ‘सुर्के थैली खै…’ र ‘पूर्व पश्चिम रेल…’ ले पनि करोड भ्युज नाघिसकेका छन् । पछिल्लो पटक ‘कान्छी’ फिल्मको ‘चरी चट्ट परी…’ पनि करोड कीर्तिमान नाघ्न सफल भएको छ ।
गायक/संगीतकार राजनराज सिवाकोटी उपहार ग्रहण गरेपछि । तस्बिर सौजन्य : सिवाकोटीको फेसबुक पेज
यही सफलताका लागि राजनलाई ‘कान्छी’ फिल्म युनिटले मंगलबार पुरस्कृत गर्‍यो । ‘कान्छी’ फिल्म र श्वेताश्री फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘कान्छी म्युजिकल नाइट’ मा बाइक गीत हिट भएपछि सिवाकोटीलाई बाइक उपहार ग्रहण गर्दा राजन उत्पात खुसी देखिए । ‘मैले कल्पनै नगरेको गिफ्ट पाएँ,’ उनले भने, ‘बाइक वा पैसा पाएकोमा भन्दा पनि निर्माताहरूले सर्जकलाई सम्मान गरेकोमा खुसी लागेको छ ।’ उनका अनुसार नेपाली गीतसंगीत क्षेत्रमा यस्तो पुरस्कार नौलो हो । नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा गीत किनेपछि सर्जकलाई खासै सम्झिने गरिएको देखिँदैन ।
गीत चले फिल्मकै प्रमोसन हुन्छ । राजनले यसअघिका गीतबापत् फिल्म टोलीबाट औपचारिक स्याबासी पाएका थिएनन् । यद्यपि, एउटा कामले अर्को काम दिलाइरहे । एकपछि अर्को फिल्मका लागि गीत बनाउन पाए, कन्सर्टको निम्तो थपियो । उनी यसमै चित्त बुझाइरहेका थिए ।
‘मैले मौका पाएँ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘आफूलाई प्रमाणित गर्न सकेँ । अब फिल्म समूहहरूले यसरी प्रोत्साहन गर्न थाले भने संगीत क्षेत्र झन् ऊर्वर हुन्छ । अरू संगीतकर्मीलाई पनि प्रेरणा मिल्छ ।’ फिल्मका गीत सर्जकले निर्मातालाई बेच्छन् । निर्माताले हाइटलाइट्स नेपाल, बुढासुब्बा डिजिटलजस्ता डिजिटल मार्केटिङ कम्पनीलाई फिल्मको सर्वाधिकै दिन्छन् । यसो गरेपछि गीतको भ्युज जतिसुकै भए पनि सर्जकले त्यसबापत् नामबाहेक केही पाउँदैनन् ।
‘मेरा गीतको करोडका करोड भ्युज छ,’ राजनले सुनाए, ‘त्यसैले मान्छेहरू कहाँकहाँ जग्गा किनिस् भनेर सोध्छन् । आफूले कतैबाट केही पाएको होइन ।’ सर्जकबारे सम्बन्धित क्षेत्रले केही न केही पक्कै सोचेको छ भन्नेमा उनी आशावादी छन् । रोयल्टी संकलन समाज, प्रस्तोता समाजजस्ता संगीतकर्मीका संस्थाले पनि पहल गरिरहेको राजनले जानकारी दिए । गत वर्ष आफूले रोयल्टीबापत् एक लाख रुपैयाँ पाएको उनले बताए । ‘अरूलाई दिएर खेर जाँदैन,’ उनले भने, ‘नदिए पनि कति दिन पुग्ला र ? पैसामा कसैको फोटो टाँसिएको छैन । हामी कलाकर्मीले बाँडीचुँडी खानुपर्छ ।’
नेपाली युवतीलाई पछ्याउदै आएका भारतीय युवक पक्राउ
एसइई (SEE) परीक्षाको नतिजा आज सार्वजनिक हुदै, आफ्नो मोबाइलबाट यसरी हेर्नुहोस
२४ वर्ष फ्रिज गरिएको भ्रूणबाट बच्चा जन्मियो !!
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विदेशी मुद्रा सटही दर कति छ हेर्नुहोस !!